နယူးယောက်မြို့ကနေသို့မဟုတ်အကောင်းဆုံးအလုပ်အမှုဆောင်ဇိမ်ခံကားပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှု, ကြှဲ, Rochester, Yonkers, ဆိုင်းရာကူစ်း, အယ်လ်ဘာနီ, နယူးယောက်မြို့စက်ရုံ Springs, နယူးယော့လေယာဉ်လေယာဉ်ငှားရမ်းခြင်းကုမ္ပဏီဝန်ဆောင်မှု 646-233-0228 ငါ့ကိုအနီးဖြစ်စေစီးပွားရေးအဘို့အအာကာသ deadhead ရှေ့ပြေးဗလာခြေထောက်များအတွက်, အရေးပေါ်အခြေအနေ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များဖော်ရွေလေယာဉ်နှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှစ်သက်? သင်သည်သင်၏လာမည့်ခရီးလမ်းဆုံးရအကောင်းဆုံးအလေယာဉ်ကုမ္ပဏီအကူအညီမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူစို့!
သငျသညျ New York မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်ဝန်ဆောင်မှုငှားရမ်းလျှင်အချိန်အတိတ်ကအရာတစုံတခုရှိနိုင်ပါသည်စောင့်ဆိုင်း. ပျမ်းမျှချောင်းမြောင်းအချိန်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်4သို့6မိနစ္မ်ား. လှညျးစစ်ဆေးမှုများမှာရှည်လျားသောလိုင်းများရှောင်ရှားနေစဉ်သင်သည်သင်၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုစတင်, လက်မှတ်အရောင်း, သင့်ရဲ့လေယာဉ်လုံခြုံရေးနှင့် boarding.
သငျသညျနယူးယောက်မြို့ဧရိယာ '' ကနေသို့မဟုတ် Empty ခြေထောက်သဘောတူညီမှုကိုရှာဖွေမယ်တစ်ဦးတည်းသာလမ်းကြိုတင်ဘွတ်ကင်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်များ၏ဗလာပြန်လာလေယာဉ်ခရီးစဉ်များအတွက်လေကြောင်းလိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုနေတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်.
New York မှာ chartering ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလေယာဉ်ပျံပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအဘို့အောက်တွင်သင့်အနီးဆုံးမြို့ထုတ်စစ်ဆေး.
အယ်လ်ဘာနီ Cheektowaga တောင်ပေါ်မှာ Vernon ဥတီဂ်
Amherst Clarkstown နယူး Rochelle Rochester
Bronx Greenburgh နယူးယောက်စီးတီး Staten ကျွန်း
ဘရွတ်ကလင်း Long Island တွင် မြောက်အမေရိက Hempstead ဆိုင်းရာကူစ်း
ကြှဲ မန်ဟက်တန် နိုင်အာဂရာရေတံခွန် Yonkers
ပုဂ္ဂလိကနှင့်အများပြည်သူဂျက်လေယာဉ်ကွင်းတည်နေရာများစာရင်းအနီးအနားမှာကျနော်တို့ကိုသင်အတွက်ပျံသန်းနိုင်သည်လေဆိပ်အနီးဆုံးအာကာသလေယာဉ်ပျံလေကြောင်းဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်သင့်ရဲ့ဧရိယာထဲမှာအစေခံ & ထဲက နယူးယောက်, နယူးယော့ ဇိမ်ခံစင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်အသေးကနေအားလုံးဂျက်အမျိုးအစားများကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိပါတယ်, အလယ်အလတ်, ကြီးမားသောပင်ဂျမ်ဘိုဂျက်လေယာဉ် . ကိုးကားထံမှမည်သည့်အာကာသလေယာဉ်လေကြောင်းလိုင်းကိုရွေးချယ်ပါ, Hawker, လီယာ, သိမ်းငှက်, အန်တုသူ, Gulfstream, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Express ကို, ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အစည်းအဝေးအတွက်ဘိုးအင်းစီးပွားရေးဂျက်, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတနင်္ဂနွေအားလပ်ရက်. ကျနော်တို့နာရီအနည်းငယ်နှင့်အတူအားလုံးသင့်ရဲ့ဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်စီစဉ်နိုင်ပါတယ် https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_airports_in_New_York
New York မှာလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးအရာ, ကြှဲ, Rochester, Yonkers, ဆိုင်းရာကူစ်း, အယ်လ်ဘာနီ, နယူးယောက်မြို့စက်ရုံ Springs, နယူးယော့ထိပ်တန်းညပွဲလမ်း, ငါ၏အဧရိယာတဝိုက်စားသောက်ဆိုင်နှင့်ဟိုတယ်များကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ဗားမောင့်ကိုငှားရမ်း | ပဋိညာဉ်စာတမ်းပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်က New York မြို့